Voatohintohina ny fitrandrahana vaovao
Mpanao gazety maromaro no voasaka tamin’ny fitrandraham-baovao notanterahina tao amin’ny Banky foiben’i Madagasikara, Antaninarenina, ny zoma teo. Voatohintohina, araka izany, ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, raha ny zava-niseho teny an-toerana. Vao ny 3 mey teo anefa no nankalazana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Mbola lavitra ezaka ny fametrahana ny asa fanaovan-gazety ho hery fahefatra raha ny zava-misy eto Madagasikara.
Olona telo no maty tany Toliara
Taorian’ny famaranana fifaninanana kopikole notanterahina tany Toliara, ny farany herinandro teo, fantatra fa olona telo no maty ary ampolony ireo naratra, nandritra ny fivoahana ny vavahady nanatanterahana ny lanonam-pamaranana tany an-toerana. Nisy nilaza fa gafy no nahatonga izao voina izao. Anisan’ny niteraka izao loza izao, ny fibosesehan’ny olona nivoaka teo amin’ny vavahady nandritra ny firavana.
Te hametraka ny olony hatrany ny Frantsay
“Mikorontana tanteraka ny raharaham-pirenena ankehitriny“, hoy ny filohan’ny antoko Asandratro ny fireneko, James Ratsimba, ny farany herinandro teo. Anisan’ny tomponandraikitra amin’izany ny Frantsay, izay te hametraka ny olony hatrany. Nohozavainy fa manhy ny ho lasan’ny Tavaratra sy ny Tiorka ary ny Sinoa ny harenantsika izy ireo, izay heveriny ho toy ny azy.